Ucoin စျေး - အွန်လိုင်း U ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Ucoin (U)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Ucoin (U) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Ucoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Ucoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Ucoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
UcoinU သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0306UcoinU သို့ ယူရိုEUR€0.0258UcoinU သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0233UcoinU သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0278UcoinU သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.272UcoinU သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.192UcoinU သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.675UcoinU သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.114UcoinU သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0405UcoinU သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0427UcoinU သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.673UcoinU သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.237UcoinU သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.164UcoinU သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.29UcoinU သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.16UcoinU သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0419UcoinU သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0467UcoinU သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.952UcoinU သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.213UcoinU သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.26UcoinU သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩36.29UcoinU သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦11.81UcoinU သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.23UcoinU သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.836
UcoinU သို့ BitcoinBTC0.000003 UcoinU သို့ EthereumETH0.00008 UcoinU သို့ LitecoinLTC0.000562 UcoinU သို့ DigitalCashDASH0.000337 UcoinU သို့ MoneroXMR0.000343 UcoinU သို့ NxtNXT2.39 UcoinU သို့ Ethereum ClassicETC0.00451 UcoinU သို့ DogecoinDOGE8.83 UcoinU သို့ ZCashZEC0.000371 UcoinU သို့ BitsharesBTS0.942 UcoinU သို့ DigiByteDGB0.979 UcoinU သို့ RippleXRP0.109 UcoinU သို့ BitcoinDarkBTCD0.00105 UcoinU သို့ PeerCoinPPC0.101 UcoinU သို့ CraigsCoinCRAIG13.94 UcoinU သို့ BitstakeXBS1.3 UcoinU သို့ PayCoinXPY0.534 UcoinU သို့ ProsperCoinPRC3.84 UcoinU သို့ YbCoinYBC0.00002 UcoinU သို့ DarkKushDANK9.82 UcoinU သို့ GiveCoinGIVE66.25 UcoinU သို့ KoboCoinKOBO6.97 UcoinU သို့ DarkTokenDT0.0282 UcoinU သို့ CETUS CoinCETI88.34